हामीले खाने म:म बनाउन रागा-भैसी माथि यस्तो अत्याचार, रबिले उठाए आवाज ( भिडियो सहित ) - ThikThak Nepal
Home / news / हामीले खाने म:म बनाउन रागा-भैसी माथि यस्तो अत्याचार, रबिले उठाए आवाज ( भिडियो सहित )
तपाइँ हामि भोक लागेको बेला खुब मिठो मानेर म:म खाइरहेका हुन्छौ। तर कहिले सोचेका छौ यो म:म आखिर बन्छ चै कसरी ? काठमाडौ लगायत देश भर मःमः पसलमा पाक्ने र तपाई हामीले खाने बफ मःम बन्न गाँउगाँउबाट काठमाडौं भित्र्याइने राँगा-भैसी लाइ कति दुख र पिडा दिइन्छ।
तपाइँ हामीलाई एउटा सानो घाउ हुदा सहन नसक्ने महान प्राणि हामीनै यिनै राँगा-भैसीलै मर्नु अघि सयौ पटक मार्छौ। कुनै पनि जिबनको अधिकार हुन्छ, मान्छे महान प्राणी हो तेसैले मान्छेको मात्र जिबन अधिकार हुन्छ ! हैन सबैको उत्तिकै हो तर हामीमा तेस्तो सोच्ने सक्ति छैन कुरा तेती हो। म:म बनाउन ल्याउदा ट्रकमा लोड गर्नु अघि देखिने यिनी हरुको दाना पानी बन्द गरिन्छ। भोक प्यासले मरणासन्न भएका यी जनावरलाई सास समेत फेर्न नसकिने गरि ट्रकमा कोचिंन्छ, खादिन्छ। नाक छेडेर डोरी बाधिन्छ , बस्न नमिल्ने गरी पुछारमा डोरीले कसेर डण्डीमा बाधिन्छ। घन्टौ सम्म उभेर भोक प्यास सहेर आखा बाट रगत का आसु निकालेर रोइ कराई गरिरहेका हुन्छन।
मान्छेको जिबनको मूल्य नभएको देशमा पशु ले अधिकार पाएन भन्नु आफैमा मुर्खता पनि हुन् सक्छ। मारिनु अघिनै मरेको जस्तै गरि मान्छेले घन्टौ यातना दिएर ल्याएको राँगा-भैसी सास मात्रै बाकि रहने गरि झुण्डाएर आइपुग्छ। तपाइँ हाम्रै जिब्रोको स्वाद बनाउन उनीहरुलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पार्छन। तेही राँगा-भैसी मःमः पसलको मैदाको पिठोमा बेरिएर तपाई हाम्रो पेट मा पुग्छ र भन्छौ आहा कति स्वादिलो।
हामीले खाने म:म बनाउन रागा-भैसी माथि यस्तो अत्याचार, रबिले उठाए आवाज ( भिडियो सहित ) Reviewed by ThikThak TV on July 30, 2018 Rating: 5